I Am Not A Witch (2017) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 6.9/10 2961 votes
Chileshe Kalimamukwento, Dyna Mufuni, Gloria Huwiler, Henry B.J. Phiri, Maggie Mulubwa, Nancy Murilo, Nellie Munamonga, Ritah Mubanga, Travers Merrill
အာဖရိကတိုကျ ဇမျဘီယာနိုငျငံတောနယျလေးတဈနရောမှာ ၈နှဈ အရှယျကောငျမလေး ရှုလာက စုနျးမလို့ စှပျစှဲခံရပါတယျ။ သူ့ကို စုနျးဆရာကွီးတှေ စဈဆေးလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ ကောငျမလေးက စုနျးမဖွဈနတေယျလို့ ပွောပွီး စုနျးတို့ အဆငျတနျဆာဖွဈတဲ့ လှနျး အကွီးစားနဲ့ သူ့ ကြောကို တှဲထားပါတယျ။ အဲ့ဒီ့ ကွိုးကို ဖွတျရငျ ကောငျမလေး ဆိတျအဖွဈ အသှငျ ပွောငျးသှားမယျလို့ ပွောထားပါတယျ။ ကောငျမလေးလညျး သူ့အရငျ စုနျးတှနေဲ့အတူ စိုကျခငျးတှေ၊ လယျကှငျးတှထေဲ ကူပေးရတယျ။ တဈနမှေ့ာ ရဲအရာရှိရဲ့ အမှုတဈခုကို ကူပေးရာက နာမညျကွီးလာပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ခတျေသဈလူနမှေုမှာ စုနျးလိုအယူကို လကျမခံတဲ့အတှကျ လူတှနေဲ့ ရှုလာတို့ အဆငျမပွဖွေဈပွီး ဒီလမျးကနေ ရှုလာတဈယောကျ လှတျအောငျပွေးခငျြလာတယျ။ မိုးခေါငျတဲ့ သူတို့ဒသေမှာ မိုးရှာအောငျလုပျခိုငျးရာမှာ ရှုလာအကွပျတှသှေ့ားတယျ။ နောကျဆုံး ဇာတျသိမျးမှာတော့ ရှုလာအတှကျကော၊ စုနျးတှအေတှကျ အဖွတေဈခုပေးသှားပါတယျ။
I’m notawitch ဇာတျကားကွညျ့ပွီး တှေးမိတာက
နှောငျကွိုးဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ။ ကြှနျတျောတို့ကို ရှေးလူတှေ အဆငျ့ဆငျ့ လကျဆငျ့ကမျးလာတဲ့ အယူတှေ၊ ဓလတှေ့ေ ထုံးတမျးတှကေ ကြှနျတျောတို့ကို သှားခငျြတဲ့နရော သှားလို့မရအောငျ တုတျနှောငျထားပါတယျ။ ဒီနှောငျကွိုးတှကေို ဖွတျမိပွီး တဈခုခု လုပျလိုကျမယျဆိုရငျ တဈခုခုဖွဈမယျလို့ ငယျစဉျတညျးက သငျယူခံထားရပါတယျ။ အကွောကျတရားအောကျမှာ၊ ကွိုးတှရေဲ့ အတုပျအနှောငျအောကျမှာ ကြှနျတျောတို့ ငွိမျနရေပါတယျ။
ဇမျဘီယာလူမြိုးအမြိုးသမီးဒါရိုကျတာ Rungano Nyoni
ကိုယျတိုငျ ဇာတျညှနျးရေးပွီး ရိုကျကူးထားတဲ့ I’m Not A Witch ဇာတျကားမှာ အဲ့ဒီလို နှောငျကွိုးမြိုးကို နိမိတျပုံယူပွီး ရိုကျပွထားပတယျ။
Cannes ရုပျရှငျပှဲတျောမှာ Golden Camera ဆုအတှကျ ဆနျခါတငျစာရငျးဝငျခဲ့ပွီး BAFTA Film Award ဆု ရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတျကားဖွဈပွီး OSCAR အကောငျးဆုံးနိုငျငံခွားဘာသာစကားပွောဇာတျကားဆုအတှကျ British Entry အနနေဲ့
အာဖရိကတိုက် ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံတောနယ်လေးတစ်နေရာမှာ ၈နှစ် အရွယ်ကောင်မလေး ရှုလာက စုန်းမလို့ စွပ်စွဲခံရပါတယ်။ သူ့ကို စုန်းဆရာကြီးတွေ စစ်ဆေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကောင်မလေးက စုန်းမဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပြီး စုန်းတို့ အဆင်တန်ဆာဖြစ်တဲ့ လွန်း အကြီးစားနဲ့ သူ့ ကျောကို တွဲထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ ကြိုးကို ဖြတ်ရင် ကောင်မလေး ဆိတ်အဖြစ် အသွင် ပြောင်းသွားမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ကောင်မလေးလည်း သူ့အရင် စုန်းတွေနဲ့အတူ စိုက်ခင်းတွေ၊ လယ်ကွင်းတွေထဲ ကူပေးရတယ်။ တစ်နေ့မှာ ရဲအရာရှိရဲ့ အမှုတစ်ခုကို ကူပေးရာက နာမည်ကြီးလာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခေတ်သစ်လူနေမှုမှာ စုန်းလိုအယူကို လက်မခံတဲ့အတွက် လူတွေနဲ့ ရှုလာတို့ အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး ဒီလမ်းကနေ ရှုလာတစ်ယောက် လွတ်အောင်ပြေးချင်လာတယ်။ မိုးခေါင်တဲ့ သူတို့ဒေသမှာ မိုးရွာအောင်လုပ်ခိုင်းရာမှာ ရှုလာအကြပ်တွေ့သွားတယ်။ နောက်ဆုံး ဇာတ်သိမ်းမှာတော့ ရှုလာအတွက်ကော၊ စုန်းတွေအတွက် အဖြေတစ်ခုပေးသွားပါတယ်။
I’m notawitch ဇာတ်ကားကြည့်ပြီး တွေးမိတာက
နှောင်ကြိုးဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို ရှေးလူတွေ အဆင့်ဆင့် လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ အယူတွေ၊ ဓလေ့တွေ ထုံးတမ်းတွေက ကျွန်တော်တို့ကို သွားချင်တဲ့နေရာ သွားလို့မရအောင် တုတ်နှောင်ထားပါတယ်။ ဒီနှောင်ကြိုးတွေကို ဖြတ်မိပြီး တစ်ခုခု လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်ခုခုဖြစ်မယ်လို့ ငယ်စဉ်တည်းက သင်ယူခံထားရပါတယ်။ အကြောက်တရားအောက်မှာ၊ ကြိုးတွေရဲ့ အတုပ်အနှောင်အောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ ငြိမ်နေရပါတယ်။
ဇမ်ဘီယာလူမျိုးအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာ Rungano Nyoni
ကိုယ်တိုင် ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ I’m Not A Witch ဇာတ်ကားမှာ အဲ့ဒီလို နှောင်ကြိုးမျိုးကို နိမိတ်ပုံယူပြီး ရိုက်ပြထားပတယ်။
Cannes ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ Golden Camera ဆုအတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး BAFTA Film Award ဆု ရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး OSCAR အကောင်းဆုံးနိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြောဇာတ်ကားဆုအတွက် British Entry အနေနဲ့
Chileshe Kalimamukwento Dyna Mufuni Gloria Huwiler Henry B.J. Phiri Maggie Mulubwa Nancy Murilo Nellie Munamonga Ritah Mubanga Travers Merrill
Option 1 storage.msubmovie.com 433 MB SD (480p)
Option2server.mfile.cloud 433 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 433 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 433 MB SD (480p)
Option5storage.msubmovie.com 1 GB HD (1080p)
Option6yuudrive.me 1 GB HD (1080p)
Option7sharer.pw 1 GB HD (1080p)
Option 8 server.mfile.cloud 1 GB HD (1080p)
Option9server.mfile.cloud 2.5 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 10 storage.msubmovie.com 2.5 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 11 sharer.pw 2.5 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 12 yuudrive.me 2.5 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Once UponaTime … in Hollywood (2019) 2019
Blockers (2018) 2018
The Bros (2017) 2017